संशोधनका कतिपय बुँदा मधेसकै लागि अहितकर छन् - Karobar National Economic Daily
संशोधनका कतिपय बुँदा मधेसकै लागि अहितकर छन्
query_builderJanuary 15, 2017 3:06 PM supervisor_accountकारोबार visibility4884
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य । तस्बिर: दिपक गाउँले
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संविधान निर्माणका बेलादेखि नै यसको बहुआयामिक पक्ष्बारे सुक्ष्म अध्येता हुन् । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानका बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्ने उनी राजनीतिक नेताहरूका कारण नेपालमा बनेको संविधान र कानुनले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकेकाले यो संविधानले पनि स्थायित्व पाउनेमा शंका व्यक्त गर्छन् ।
नेताहरूले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिरहँदा उनको निष्कर्ष भने संविधानमा आधा सबल पक्ष भए पनि आधा कमजोरी छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षमतालाई हेर्दा नेपालमा संघात्मक राज्य लागू हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न टीका–टिप्पणी भइरहेका बेला उनी भने प्राविधिक हिसाबले संशोधन गर्न कुनै अप्ठ्यारो नहरेको बताउँछन् । संविधानमा आधा विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा सूची तयार गरी संशोधनमार्फत नमिलेका बुँदा मिलाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
आचार्यसँग संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्ण र तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी :
संविधान निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र नेपालको संविधान विकासक्रम अध्ययन गर्दा अहिले जारी गरिएको संविधानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको संवैधानिक इतिहास र विकासक्रम बाहिरी देशसँग तुलना गर्दा एकदमै कमजोर र कामै नलाग्ने भन्नेखालको छैन । हामीले २००४ सालदेखि विधिवत् रूपमा लिखित संविधान अवलम्बन गर्ने अभ्यास सुरु गर्यौ ।
०४ सालमै पद्मशमशेरले बनाएको संविधानमा जनताका मौलिक अधिकारका कुरा उल्लेख गरिएको थियो । जबकि त्यो दिनसम्म संसारमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पनि आइसकेको थिएन । नेपालको संविधान जारी भएको करिब ११ महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
२००७ सालमा अन्तरिम संविधान बनाइयो, ०१५ सालमा संविधान बन्यो, ०१९ मा पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान बन्यो । ०४७, ०६३ भएर अहिले हामीले सातौं संविधान जारी गरेका छांै । नेपालमा दुःखद पक्ष के भइदियो भने संविधान, कानुन पटक–पटक निर्माण गरे पनि त्यो कानुन र संविधानले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन ।
यसको मुख्य कारणचाहिँ यससँग जोडिएका राजनीतिक पात्रहरू नै हुन् । यसको पछिल्लो उदाहरण संविधानसभाबाट बनाउने भनिसकेपछि हामीले ०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्यौ । यो दिनसम्म आउँदा पनि दलहरूको प्रवृत्ति संविधान र कानुनलाई हल्का रूपमा लिने कुराको सुधार भएन । उदाहरणका लागि संविधानसभाले संविधान लेख्ने भनियो, त्यसमा हामीले समर्थन गर्यौ ।
संविधान जारी गर्दा नाटकै सही तर मान्छेलाई केही प्रभाव पार्नुपर्छ भने यो प्रक्रिया तिमीहरूका लागि हो भन्ने कुराको अनुभूति नेताहरूले गराउनुपथ्र्यो ।
तर, ३ गते जारी गर्दा केही सुझबुझ पुयाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत रूपमा दलहरूलाई आग्रह थियो । त्यतिबेला मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यहाँका मानिसले केही भिन्न मत राखेका थिए । संविधान जारी गर्दा नाटकै सही तर मान्छेलाई केही प्रभाव पार्नुपर्छ भने यो प्रक्रिया तिमीहरूका लागि हो भन्ने कुराको अनुभूति नेताहरूले गराउनुपथ्र्यो ।
अब संविधान जारी गर्दा कुनै तप्काले आफूलाई त्यो प्रक्रियामा म छैन भन्ठान्यो भने जबरजस्ती गर्न हुँदैन । त्यसैकारण ३ गते संविधान जारी गर्दा यो प्रक्रिया केही पर लाँदा मधेसका मान्छे सन्तुष्ट हुन्छन् भने पर लैजाआंै भन्ने मेरो राय थियो ।
तर, नेताहरूले मानेनन् र त्यसको प्रतिफल आज देखिएको छ । त्यति बेला केही समय ढिला गरिएको भए असन्तुष्टको पनि आत्मसम्मान हुने थियो होला । अहिले आएर त्यसको बहानामा संविधान संशोधनका मुद्दा बाहिर आएका छन् । सबै मुद्दा नेपालले सम्बोधन गर्न सम्भव पनि छैन र गर्यो भने धेरै गाह्रो हुने देखिन्छ । आजसम्मको नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा धेरै चिज हामीले प्राप्त गरेका छौं ।
राम्रा संविधान पनि लेखिएका छन्, तर दुर्भाग्य त्यो कुनै चिजको स्थायित्व भएन । नेताहरूको बानीमा कुनै सुधार छैन । यिनीहरू कानुन, संविधान र जनतालाई खेलौनाका रूपमा लिन्छन् । त्यो प्रवृत्ति ज्यूँका त्यूँ छ । अहिलेको सबै समस्या त्यसै कारणले उत्पन्न भएको हो जस्तो लाग्छ ।
२०४७ सालको संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो र अहिले जारी भएको संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट भनिँदैछ । यो संविधान साँच्चै उत्कृष्ट हो या दुर्बल पक्ष पनि छन् ?
यो संविधानका थुप्रै सबल पक्ष छन् र सँगै दुर्बल पक्ष पनि छन् । किनभने यो धेरै लामो संविधान छ । ३ सय ८ धाराको संविधान भनेको लामो संविधान हो । यो संविधानका मुख्य पाँच–पाँच सकारात्मक तथा कमजोर पक्ष केलाउ“दा, पहिलो राम्रो पक्ष भनेको संविधानले नेपाली जनतालाई संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक धेरै ठूलो अधिकारको सूची प्रदान गरेको छ, जसलाई मौलिक अधिकार भनिन्छ ।
नेपाली जनतालाई मौलिक अधिकारको लामो सूची प्रदान गर्नु यो संविधानको पहिलो महŒवपूर्ण विशेषता हो । यो भन्दा पहिलेका संविधानमा पनि मौलिक अधिकारहरू थिए तर यति धेरै अधिकारचाहिँ दिइएको थिएन । यो संविधानले ३१ वटा अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनेको छ । दोस्रो सबल पक्ष भनेको नागरिकताको सवालमा पनि विगतको संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधानका प्रावधानहरू लचक छन् ।
नेताहरूको काम गर्ने तरिका हेर्ने हो भने कुनै पनि तह वा निर्वाचनका लागि उहाँहरू इमानदारीपूर्वक लागेको देखिँदैन ।
उदाहरणका लागि पहिलो पटक संविधानले महिलालाई वंशको अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैले लैंगिक पहिचानमा नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ । बच्चाले बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्छ । वंशीय अधिकारको र लैंगिक पहिचानको नागरिकताको प्रावधान छ । यस्तो व्यवस्था नेपालको पहिलेको संविधानमा थिएन ।
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्रदान गरेको छ । अंगीकृत नागरिकताको सवालमा पनि विगतको संविधानभन्दा यो उदार छ । तेस्रो महत्वपूर्ण विशेषता भनेको समावेशिता हो । संविधानको प्रस्तावना हेर्ने हो भने समावेशिता झल्कन्छ र संविधानका धेरै ठाउँमा समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ ।
संविधानमा के लेखिएको छ भने राज्यका सबै ठाउँमा हुने नियुक्तिहरू समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ । चौथो महŒवपूर्ण पक्ष भनेको संविधानले विभिन्न पक्षका लागि भिन्नाभिन्नै आयोगको गठन गरिदिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा भोलि चुनौती आउँछ ।
तर, समुदायको स्वामित्व र आत्मसम्मानका हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई हामी सकारात्मक मान्न सक्छौं । पाँचौं महत्वपूर्ण प्रावधान भनेको संशोधनका दृष्टिकोणले पनि चारवटा कुराबाहेकलाई संशोधन गर्न सक्ने भनिएको छ ।
अब कमजोरी केलाउने हो भने यो संविधानका अनगिन्ती कमजोरी छन् । सबैभन्दा पहिलो कमजोरी भनेको संविधान अत्यन्त भद्दा छ । यसमा एक–आपासमा बाझिने र दुविधाजनक कुरा संविधानमा उल्लेख भएकाले यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या हुन्छ ।
एउटै कुरालाई यो संविधानमा फरक–फरक ढंगले लेखिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भन्छ । धारा ४ मा नेपाल राष्ट्रको परिभाषा हेर्दा समाजवादप्रति उन्मुख नेपाल राष्ट्र भन्छ । धारा ५० मा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र समाजवादमा आधारित तर स्वतन्त्र र खुला अर्थतन्त्र भन्छ । यस्ता दुविधानजनक प्रावधानहरू संविधानमा छन् ।
दोस्रो कमजोरी, यो संविधान धेरै महŒवकांक्षी छ । यसका अधिकांश प्रावधान कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् । मौलिक अधिकारकै कतिपय कुरा संघात्मक राज्यसँग जोडिएका होलान्, जुन कुनै पनि यो देशमा कार्यान्वयन हुन सक्ने म देख्दिनँ । यस्तै तेस्रो कमजोरी ९० प्रतिशतले यसको समर्थन गरे, त्यो साँचो कुरा हो । त्यसलाई हामी लिगालिटी भन्छौं ।
तर, संविधानमा लिगालिटी र लेजेटिमेसी भनेको फरक कुरा हो । लिगालिटी भनेको कानुनको प्राविधिक पक्ष हो । लेजेटिमेसी भनेको जनताको समर्थनको कुरा हो । संविधान जारी गर्दा जुन हर्कतले जारी गरियो त्यसले एउटा समुदायलाई पछिसम्म असन्तुष्ट बनाइराख्ने खतरा मैले देखिरहेको छु । वैधताका हिसाबले कानुनी पक्ष बलियो भए पनि यसको वैधानिक पक्ष कमजोर छ । चौथो कमजोरी भनेको यसको प्रस्तावना गालीगलौजबाट सुरु गरिएको छ ।
गालीगलौज दुनियाँको संविधानमा लेखिँदैन । जस्तो देशमा जन्मे पनि खराब कुरा मिलाउँदै जाने हो, तर त्यसलाई अपमान गर्ने गरिँदैन । पाँचौं कमजोरी संघात्मक राज्य हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । एकथरीका लागि यो विशेषता भए पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि यो कमजोरी हो । त्यसैले यो संविधान आधा छ । यसमा आधा कुरा राम्रा छन् र आधा कमजोर छन् जस्तो लाग्छ ।
संविधानले २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ । निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना कति हुने सम्भावना कति छ ?
संघात्मक राज्यमा मेरो भिन्न मत रहे पनि यदि यो संविधानको कार्यान्वयन २०७४ माघ ७ भित्र राज्यको तीन तहको निर्वाचन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन संविधानबमोजिम निर्धारित मितिमा भइसक्नुपर्छ ।
तर, संविधान जारी भएको १ वर्षभन्दा बढी समयमा नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने कुनै पनि तहको निर्वाचन गर्न नेताहरू लागेका छन् भन्ने लाग्दैन । निर्धारित मितिमा तीन तहको निर्वाचन हुने सम्भावना म कम देख्छु । यद्यपि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि माग हो । निर्वाचन गर्ने कुरामा मेरो समर्थन छ । तर, निर्वाचनको सम्भावना कम छ ।
किनभने अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहको विषयमा दुईवटा प्रावधान छन् । नयाँ संरचनामा निर्वाचन गर्ने हो भने स्थानीय तहको गर्नुपर्ने र एकपटकलाई गर्ने हो भने पुरानै संरचनामा गर्न सकिने भन्ने छ । यी दुई प्रावधानमध्ये जुन संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गरे पनि वैधानिक हुन्छ । तर, नेताहरूको काम गर्ने तरिका हेर्ने हो भने कुनै पनि तह वा निर्वाचनका लागि उहाँहरू इमानदारीपूर्वक लागेको देखिँदैन । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।
त्यसलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, सरकार त्यसमा गम्भीर देखिँदैन । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्भावना कम छ । कानुन मात्रै बनेको भए पनि काम गर्न सजिलो हुने थियो, त्यो पनि भएको छैन । प्रदेशको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने त्यसको त झन् सम्भावना देखिँदैन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सात प्रदेश भन्ने हो ।
प्रदेश निर्वाचनका लागि ९९ प्रतिशत काम गर्न बाँकी नै छ । संसद्को निर्वाचनको सम्भावना पनि २०७४ माघ ७ अघि कम छ । किनभने, यो रूपान्तरित संसद् भएकाले यसको म्याद नै २०७४ माघ ७ सम्म मात्र हो । मलाई के लाग्छ भने नेताहरू तीनै तहको निर्वाचन नगर्नका लागि अघि बढेका देखिन्छन् । उनीहरूको एउटा नियत के देखिन्छ भने कानुनी संविधानलाई यिनीहरूले नमान्ने भएकाले अन्तिममा माघ ७ नजिक पुग्दा यो संसद्को म्याद पुन थप्ने र संसद्को चुनाव गर्ने दाउ हुन सक्ला ।
संविधानको पालना गर्ने हो भने स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन गर्न पाए मुलुकका लागि राम्रो हुने थियो भन्ने लाग्छ । तर, तीनै तहको निर्वाचनको सम्भावनाचाहिँ म कम देख्छु ।
यदि दलहरूले संसद्को म्याद थपे र यहाँले भनेजस्तो संसदीय निर्वाचन गर्नेतर्फ लागे भने यो संविधानको सान्दर्भिकता रहन्छ कि रहँदैन ?
रहँदैन । यो बिल्कुल अवैधानिक हुन्छ । तर, नेताहरूले यही गर्छन् । उनीहरूको दम्भ, अहंकार ठूलो छ । सत्तास्वार्थका लागि उनीहरू एक हुन सक्छन् । त्यसरी म्याद थप गर्नु भनेको यो संविधानको सान्दर्भिकता अन्त्य गर्नु हो ।
त्यसो गर्नु भनेको यो संविधानको वैधानिकतालाई पनि लगभग अन्त्य गर्नु हो । यदि यो संविधान उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो, पालना गर्ने हो भने चुनाव गर्नुपर्छ । ठीक छ, व्यावहारिक रूपमा तीन तहको निर्वाचन एकैपटक हुन सकेन भने सकेको काम गर्नुपर्छ ।
तर, केही पनि काम नगर्ने, रूपान्तरित संसद्को म्याद थपेर फेरि संसद्को चुनाव गर्ने भन्ने हो भने यो संविधानको सान्दर्भिकता अन्त्य भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने संविधानको सान्दर्भिकता भनेको सुरक्षा निकायको बलले संविधान जारी हुने भन्ने हुँदैन । संविधान लागू हुनका लागि मान्छेको आत्मामा संविधान बस्नुपर्छ ।
यिनले घोषणा गर्दैमा संविधान लागू हुने, संविधान दीर्घायु गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो अहिले पनि देखिँदैन । संविधान कानुन दीर्घायु हुन जनताको आस्था हुनुपर्छ । म्याद थप्ने बाटोमा दलहरू गए भने यो संविधानको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उव्जन्छ ।
असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका लागि सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गरेको छ । संशोधनका विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेको र अदालतले आदेश पनि दिएको थियो । तर, अझै पनि यो विषयमा विभिन्न मतभेद कायमै छन् । तपाईंको धारणा के हो ?
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका रूपमा आएको निर्णय हो । त्यसको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । अन्तरिम आदेशअनुसार सर्वोच्चले दुई कुराको संकेत गरेको देखिन्छ । संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने संसद्ले जान्ने कुरा हो । यसमा हामी केही बोल्दैनांै भन्ने छ ।
यसको अर्थचाहिँ संशोधन विधेयक अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ । सीमांकन हेरफेरको संशोधन हुन सक्ने कि नसक्ने भन्नेबारेमा सर्वोच्चले केही बोलेको छैन । उसले संविधानमा भएको प्रावधान उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाको सहमति चाहिने भनेको छ ।
उल्लेख गरे पनि सीमांकनको विषयमा संशोधन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारेमा आफ्नो मतचाहिँ दिएको छैन । भोलि फेरि मुद्दा परेमा उसले अघि बढ्नुपर्ने भएका कारण उसले त्यसो गरेको होला । मलाई के लाग्छ भने विधेयक अघि बढाउनका लागि संवैधानिक रूपमा कुनै जटिलता छैन । तर, जुन अन्तरवस्तुको संशोधनको विधेयक अघि सारिएको छ, यसमा मेरो पनि भिन्न मत छ ।
मधेसी जनतालाई अधिकार दिने र राज्यको मूलधारमा ल्याउने भन्ने विषयमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । तर, त्यो विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय कुरा मधेसका लागि पनि हितकर छैनन् भन्ने लाग्छ ।
मधेसको समस्याका बारेमा अन्यथा भन्न सकिँदैन । मधेसी जनतालाई अधिकार दिने र राज्यको मूलधारमा ल्याउने भन्ने विषयमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । तर, त्यो विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय कुरा मधेसका लागि पनि हितकर छैनन् भन्ने लाग्छ । उदाहरणका लागि जुन प्रदेश नम्बर ५ टुत्र्mयाउने भन्ने विषय आएको छ । मलाई लाग्छ, त्यो ढंगको सीमांकन हेरफेरको कुराले मधेसीलाई फाइदा गर्ला जस्तो लाग्दैन ।
हिमाल, पहाडसँग अलग गरेर मधेसको छुट्टै प्रदेश बनाउने भन्ने कुरा उत्तेजित भएर सोच्दा पहाड र हिमालले हामीलाई के दियो र भन्ने आवेग हुन सक्ला । तर, मधेसको भोलिको भविष्य र पहाड, हिमालको भाविष्य हेर्दा पनि हामी जोडिनु नै हितकर हुन्छ ।
संशोधनको विषय प्राविधिक हिसाबले अघि बढाउन कुनै अल्झन छैन । तर, अन्तरवस्तुका हिसाबले हेर्दाचाहिँ विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय कुरा देश, मधेसका लागि अहितकर हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । प्रतिनिधित्व, क्षेत्र निर्धारण, राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभामा मधेसीको धेरै प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा मेरो समर्थन छ, जति तलमाथि गर्दा पनि हुन्छ । तर, प्रदेश विभाजन गर्ने चाहिँ उपयुक्त हुँदैन ।
संशोधन विधेयकमा असन्तुष्ट पक्षले परिमार्जन खोजेको छ । स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा राख्ने र स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुने गरी परिमार्जन गरांै भनेका छन् । कानुनी हिसाबले हेर्दा यी विषय कति उपयुक्त होलान् ?
यो विषय सर्वोच्च अदालत र कानुनीभन्दा पनि मुख्य कुरा राजनीतिक कुरा हो । नेताहरूले मुलुकलाई के हितकर हुन्छ, त्यो ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा सबै कुरालाई लिएर अदालत जानुपर्छ भन्ने पक्षपाती मान्छे म होइन । त्यसैले सबै विषयमा अदालत जाने, आदालतले बोल्ने, त्यसपछि मात्रै हामीले गर्ने भन्ने प्रवृत्ति हामीले त्याग्नुपर्छ ।
अदालत एउटा प्राविधिक संस्था हो, समस्या आए उसले बोल्ने हो । यी सबै विषयमा अदालतभन्दा पनि दलहरूले आफ्नै विवेकमा निर्धारण गर्ने कुरा हो । हामीकहाँ सबै राजनीतिक दलको चिन्तन अलि साँगुरो भएकाले हो । समस्या एकातिर र दलहरूको सोच अर्कातिर भएकाले पनि समस्या भएको हो । वास्तविक समस्याको पहिचान नभएर पनि हो ।
बुद्धिमानी के हुन्छ भने निर्वाचनमा सहज हुने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ । संविधानमा संशोधन गर्न आवश्यक छ । आधाआधी कुरा यो संविधानमा मिलाउनैपर्नेछ । मिलाउनुपर्ने कुराको सूची बनाएर प्राथमिकताका आधारमा संशोधनमार्फत मिलाउँदै जानुपर्छ ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बर्खास्त भइसकेको अवस्था छ । तर, उनीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव अहिले पनि संसद्मा छ । यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने महाअभियोग प्रस्ताव वा प्रक्रिया व्यक्ति पदमा रहेको अवस्थामा मात्रै आकर्षित हुन्छ । व्यक्तिको पद नै नरहिसकेपछि महाअभियोगको सन्दर्भ नरहनुपर्ने हो ।
हुन त हाम्रो देशमा नेताहरूले आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन पनि भोलि के गर्छन्, थाहा छैन । तर, संवैधानिक रूपमा सर्वोच्च आदलतको फैसलाबाट लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त भइसकेपछि महाअभियोगको सान्दर्भिकता रहँदैन ।
अख्तियार प्रमुखको पदबाहेक अन्य पदमा उनको योग्यता कायम रहन्छ कि रहँदैन ?
सर्वोच्चको तीन पानाको आदेश हेर्दा खालि अहिलेको पदका लागि मात्र अयोग्य बनाएको हो । बाँकी पदका लागि त नेपालको संविधानले उहाँलाई निषेध गरेको छैन । मलाई लाग्छ, प्रमुख आयुक्तका रूपमा उहाँ अयोग्य देखिए पनि सारा पदका लागि आयोग्य भन्ने कुरा होइन ।
नेपालमा संविधानको विकासक्रमका आधारमा दोस्रो संविधानसभाबाट घोषणा गरिएको संविधान सातौं हो । राणाशासनका बेला पद्मशमशेरको पालामा निर्माण गरिएको २००४ को पहिलो संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिक अधिकारका विषयवस्तु संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाका बेला उल्लेख गरिएका नागरिक अधिकार बन्न पुगेको पाइन्छ । यसलाई हेर्दा विकासक्रमको उत्कृष्टताका रूपमा बुझिन्छ ।
तर, यो संविधान तोकिएको समयमा कार्यान्वयन नभएपछि अध्ययनको विषयवस्तु मात्र हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभाबाट घोषित संविधानको नियति पहिलो संविधानजस्तै हुने त होइन भने चिन्ता थपिएको छ । यो संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनवटा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघीय तहको चुनाव गरिसक्नुपर्छ । संविधानका विषयवस्तु एकअर्कासँग बाझिएकाले त्यसको समाधान नभए समयमा चुनाव हुन नसक्ने चुनौती ठूलो छ ।
कार्यान्वयनका लागि चुनाव
संविधानको कार्यान्वयन सान्दर्भिकतासहित तोकिएको समयमा तीनवटा चुनाव गर्नु अपरिहार्य छ । संविधानका विषयवस्तुलाई समाधान गर्नु एउटा विषय हो भने राजनीतिक दलका असन्तुष्टि समाधान गर्नु अर्को पक्ष हो । यी दुई समस्याको समाधान गर्ने समय र तोकिएको समयबीचको अन्तर चुनाव तयारीका दृष्टिकोणले घट्दै गएको छ । १२ महिनामा तीनवटा चुनाव गर्न कतिपय कानुन बनाउन बाँकी छ । जतिसुकै राजनीतिक सहमति छिटो भए पनि कानुन बनाउन समय लागिहाल्छ ।
त्यसैले तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सबै राजनीतिक दलका नेताहरू दृढ र विश्वस्त हुन आवश्यक छ । नेताहरूको व्यवहारले चुनावका लागि समय विस्तार गर्ने योजना बुनिएको छ । यसो गर्दा चुनाव त होला, तर संविधानको सान्दर्भिकता सकिँदैन । संविधानको सान्दर्भिकता जोगाउन पनि संविधान सभाभित्रका दलहरू एकजुट हुनु आवश्यक देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता जोगाउँदै अघि बढेर मात्र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको विकासले गति लिन सक्नेछ ।
संविधान संशोधन संविधानविद्